त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो करणी गरे ! | Public 24Khabar
Home Health त्यसपछि उनीहरु दुवैले पालैपालो करणी गरे !
सामूहिक करणीमा परेकी एक किशोरी गर्भवती भएको घटना बाहिरिएको छ। मोरङको उर्लाबारीकी १७ वर्षीया किशोरीको पेटमा चार महिनाको गर्भ रहेको तथ्य खुलेको हो। उर्लाबारी नगरपालिका-५ का ३० वर्षीय प्रदीप खतिवडा र २१ वर्षीय भेषराज आचार्यले गत फागुन २७ गते किशोरीमाथि सामूहिक करणी गरेका मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताए। करणीबाट किशोरीको गर्भ बसेको उनले जानकारी दिए। चकलेटमा खराब कुरा मि’साएर खुवाउँदै अ’र्धबे’होस बनाएर खतिवडा र आचार्यले किशोरीमाथि पा’लैपा’लो करणी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
Previous articleराष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थीहरुलाई परीक्षासम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सुचना ।।
Next articleविदेशमा अलपत्र नेपालीको यसरी हुन्छ निःशुल्क उद्धार